Singapore - Vahaolana OMG - Ampio ny Elderly hisoroka ny orana sy ny fandroana | Vahaolana OMG
OMG Solutions - Manome vahaolana ara-teknolojia midadasika isika toy ny fisorohana amin'ny fahalavoana, fanairana vonjy maika / fahasahiranana, trackers GPS ary fakan-tsary miambina. Mikarakara ny fikarakarana ny fihenan'ny enta-batana sy ny fihetseham-po vokatry ny fitakiana hikarakarana ny kilemaina na ny antitra.
vCare dia rafitra fanairana fanairana azo ampiasaina amin'ny zokiolona, ​​ao an-trano. Ny rafitra dia manome fampangaroana ny fampiasana, ao ny fiarovana ny tokantrano, fomba fiaina mahasalama ary fikarakarana ny zokiolona. Mampiasa tambajotra roa (WiFi sy GSM / 3G na 4G) hampita vaovao hampandeha fanairana - fomba tsotra, azo antoka ary haingana.
Mianjera ny fisorohana ary mora fanaraha-maso ny zokiolona
42139 Total Views 6 Views Today